China Hot lelana basy lakaoly, basy lakaoly elektrika, basy rivotra mafana, basy welding plastika, ozinina sy mpanamboatra firapotra | Boda
Basy lakaoly miempo mafana, miaraka amina valiny marina, isan-karazany ny nozera, dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny tsipika famokarana samihafa, famolavolana sivana tsy manam-paharoa, mahasoa amin'ny fanadiovana sy toetra hafa. Ny basy lakaoly miempo mafana matetika dia tsy ho simba rehefa ampiasaina amin'ny 300 ℃ mandritra ny fotoana maharitra, ary maharitra ny fiarahana. Noho izany, ny milina fametahana hafanana mafana dia be mpampiasa amin'ny ozinina elektronika, ozinina famonosana, ozin-fonosana sns. Mba hanonerana ny lesoka basy fitifirana mandeha ho azy sy hihaona amin'ny filan'ny fampiasana finday dia vita ny akorandriaka amin'ny vatan'ny basy ny akora hafarana, izay mahazaka hafanana ambony 300 ℃ ary miantoka tsy misy fiovana eo ambanin'ny mari-pana avo lavalava. Maivana ny lanjan'ny basy ary mora ampiasaina. Ny famolavolana fitaovana fiarovana tsy manam-paharoa dia afaka manakana ny mpandraharaha tsy hikororoka tsy misy fitandremana rehefa miasa; ny iraisan'ny rehetra miaraka amin'ny haitao mandroso Eoropeana dia mahatonga azy io ho mora ampiasaina sy mateza; ny visy, ny esorina, ny tasy ary ny zavona dia azo ampiasaina amin'ny indostria samihafa
Ny vy mandeha amin'ny solika dia fitaovana ilaina amin'ny fikojakojana ny herinaratra. Ny tena tanjon'izy ireo dia ny famonoana ireo singa sy tariby Du. Amin'izany fomba izany dia hafanaina amin'ny hafanana sasantsasany ny velaran'ny faritra misy ny welding sy ny solder mba hampitsonika ny solder, ary ny fanaparitahana metaly dia miseho eo amin'ny interface sy mamorona sosona mifamatotra, mba hahatsapany ny fehy vy.
Rehefa mihodina dia tazony amin'ny tànana ankavanana ny vy mandrehitra herinaratra araka ny aseho amin'ny sary 1-20, ary tazomy amin'ny tànana havia ny elatra na tariby amin'ny tànana havia miaraka amina baoritra na tweezers. Alohan'ny fametahana dia tokony hafanaina tanteraka ny vy mandeha amin'ny herinaratra. Solder sasany dia tokony hoentina eo an-tsisin'ny loham-by vy. Apetaho eo akaikin'ny mpiraikitra ny sisin'ny loham-by vy. Ny vy elektrika dia manodidina ny 60 ° mankany amin'ny fiaramanidina marindrano. Mba hanamorana ny fikorianan'ny tin-drongony avy amin'ny lohan'ny solder mankany amin'ny joint solder. Ny fotoana fitazonana ny lohan'ny soldering amin'ny mpiray solder dia tokony fehezina ao anatin'ny 2-3 segondra. Asandrato ny lohan'ny vy mirindra, ary mbola mitazona ilay singa ny tanana havia. Aorian'ny fampangatsiahana sy fanamafisana ny vinaingitra amin'ny vitrana, dia afaka mivoaka ny tanana havia. Mampiasà tweezers hampiodina ny tariby firaka. Aorian'ny fanamafisana fa tsy malalaka izy io, dia azonao atao ny manapaka ny tariby mitarika miverimberina miaraka amin'ireo mpanapaka sisiny.
Basy fantsom-by vita amin'ny plastika no be mpampiasa amin'ny doka fanaovana dokambarotra, labasy, membrane tsy misy rano, liner anti-seepage, membrane tsy mahazaka rano, fantsom-pitaterana, singa elektronika, bumper automatique, gorodona fanatanjahantena, fanodinana landihazo perla, fitoeran-drano elektrika, fantsom-plastika, takelaka PP / PE / PVC sy ny firafitry ny membrane ary ny fanamboarana ny geomembrane eo an-toerana.
Fady ny mampiasa herinaratra simba na tsipika herinaratra ho an'ny famandrihana; fady ny mampiasa azy io amin'ny toe-javatra faran'izay mafy na amin'ny tontolo iainana marobe (amin'ny masoandro mafana na fiara mafana); fady ny mandrava ny bateria ary mamadika ny bao miabo sy miiba; fady ny mandondona, manipy, manitsakitsaka ary manakodia ny basy lakaoly; fady ny mampiditra ny vy any ivelany any amin'ny seranan-tsambo; fady ny mampiasa batterie ivelany hanomezana angovo; aorian'ny fanesorana ny bateria dia tokony hapetraka ny fitsaboana tanteraka. Ny fitaovana dia tsy tokony hampiasain'ny ankizy na olona manana fahalemena ara-batana na ara-tsaina, na tsy fananana traikefa sy fahalalana, raha tsy hoe eo ambany fanaraha-maso na torolàlana izy ireo; manara-maso ny ankizy mba tsy hilalao amin'ny fitaovana. Raha simba ny tadin'ny herin'ity fitaovana ity dia tsy maintsy soloin'ny mpanome serivisy anay izany, izay ilaina ho fitaovana manokana sy / na ampahany.
1 、 Azafady vakio tsara ny fitsipika sy torolàlana momba ny fiarovana alohan'ny hampiasana azy. Azafady azafady mba hampiasaina amin'ny ho avy ity boky torolalana ity
1. Aza avela ny olona izay tsy mahalala ny basy lakaoly na tsy mahalala ireo fitsipika sy torolàlana momba ny fiarovana ireo dia mampiasa basy lakaoly.
2. Tsy mahazo mampiasa an'io ny zaza latsaky ny valo taona. Hamarino tsara fa tsy misy amin'ireo zaza latsaky ny valo taona ny tehina. Ahiana ho sempotra raha atelinao ilay hazo.
3. Ny ankizy sy ny olona manana kilema ara-batana, ara-pihetseham-po na ara-tsaina na tsy ampy traikefa sy fahalalana dia tsy mahazo mampiasa basy lakaoly. Ny zaza mihoatra ny valo taona sy olona manana kilema ara-batana, ara-tsaina na ara-tsaina na tsy ampy traikefa sy fahalalana dia afaka mampiasa ity basy lakaoly ity raha toa ka manara-maso ny fiarovana azy ireo izy ireo na efa nomen'ny mpiambina ny fampiasana ny lakaoly basy, ary efa nahatakatra ny fiarovana sy ny torolàlana momba ny fiarovana.
4. Tsy mahazo manadio, mitazona ary mampiasa ny basy lakaoly ny ankizy raha tsy misy fanaraha-maso.
5. Zahao ny basy lakaoly alohan'ny hampiasana azy tsirairay. Raha vantany vao hita fa simba ny basy lakaoly sy ny tsipika famenoana, dia tsy tokony hampiasaina izy ireo. Aza manokatra irery ny basy lakaoly. Ireo matihanina mahay ihany no afaka mampiasa ireo kojakoja namboarina ho fikojakojana.
6. Aorian'ny fampandehanana ny basy lakaoly dia tsy avela tsy ho arahi-maso.
7. Aza mikasika ny fonon-tsoavaly sy ny silipo.
8. Ireo matihanina mahay ihany no mahazo mampiasa ireo kojakoja tany am-boalohany hanamboarana ny basy lakaoly. Io fomba io ihany no ahazoana antoka ny fahombiazan'ny vokatra azo antoka.
9. Tsy mahazo mampiasa basy lakaoly rehefa alona anaty rano na lena.
10. Aza atsipy any anaty afo ilay tsorakazo.
2, Fitsipika momba ny fiarovana amin'ny famandrihana
1. Aza andoavam-bola amin'ny fampiasana azy, aza sarahana bateria mafana.
2. Tsy mahazo miakatra amin'ny latabatra mora may (toy ny taratasy, lamba, lamba sns) na amin'ny tontolo mora may.
3. Aza sarotiny amin'ny rano na amin'ny toetranao lena.
3, Famaritana ny vokatra sy ny fahombiazana
1, basy lakaoly dia mety amin'ny fifamatorana maimaim-poana, toy ny taratasy, baoritra, bosoa, hazo, hoditra, lamba, foam, plastika sasany, seramika, porcelain, vera sy vato.
2. Mety amin'ny fifamatorana, fanamboarana, haingon-trano sy ny maodely.
3. Tsy mety amin'ny zavatra misy mari-pana mifatotra 50 degre sy ambony izy io.
4. Tsy mety amin'ny fampifamatorana zavatra mifandraika mivantana amin'ny rano na ranoka.
Avereno azafady ny bokotra switch, ho velona ny jiro manga.
Azafady mandroso ny bokotra switch mba hilazana fa maty ny switch.
3. Raha maty ny jiro manga dia tokony hokaramaina ara-potoana izy io. Ny jiro mena dia mirehitra mandritra ny famandrihana.
4. Ny jiro maintso dia mandeha foana, maneho fa feno ny herinaratra
5. Azafady mba ampirimina soa aman-tsara ilay basy lakaoly nikatona aorian'ny fampiasana azy, ary ataovy mangatsiaka tanteraka alohan'ny amboarany. Mety hiteraka fahavoazana ny noôtô basy hafanana.
6. Arovy ny olona sy ny biby amin'ny lakaoly mafana sy ny moos. Rehefa mifandray amin'ny hoditra ny lakaoly mafana, sasao avy hatrany amin'ny rano mangatsiaka mandritra ny minitra vitsivitsy. Aza manandrana manala ny lakaoly mafana amin'ny hoditra.
7. Ny lakaoly lakaoly maripana ambany ihany (mari-pana mampihena eo anelanelan'ny 100 sy 150 ℃) misy savaivony 6.8-7.2mm no azo ampiasaina.
8. Aza mampiasa tapa-kazo mametaka mari-pana.
9. Voakasiky ny ranon-javatra, ny hamandoana ary ny maripana ambony, dia mety hianjera irery ireo faritra miraikitra.
5. Fanomanana fatorana
1. Ny toerana fatorana dia tsy maintsy madio, maina ary tsy misy menaka.
2. Ireo fitaovana miaraka amin'ny adhesive dia tsy ho mora mirehitra.
3. Azafady mba andrana aloha ny fahazoana mampiasa ny fitaovana ara-tsolika amin'ny alàlan'ny workpiece santionany.
4. Ny maripana manodidina sy ny mari-pana amin'ny zavatra ampifanarahana dia 5 ℃ - 50.
5. Ny fitaovana afaka manao ny adhesive miempo mafana dia mangatsiaka haingana dia tokony hialohan'ny basy mafana
6 、 Famatorana
7 、 Vita
8 causes Ny antony tsy fahombiazana sy ny fepetra fitsaboana
1. Atsofohy ao anaty lakan-tsakafo ny tehina.
2. Sokafy ny basy lakaoly ary manafana azy 180 segondra alohan'ny hampiasana azy.
3. Ny lakaoly dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanindriana ny masinina.
4. Avy hatrany aorian'ny fampiharana ny adhesive melt mafana, potsero ny fitaovana hifamatotra mandritra ny 10 ka hatramin'ny 30 segondra. Ny fanamafisana ny toerany dia azo ahitsy ihany koa.
Rehefa avy mangatsiaka mandritra ny dimy minitra dia azo alefa ny fifamatorana.
5. Tandremo sao mampiasa faritra misy ny vatana amin'ny fifandraisana mivantana amin'ny dity mafana miempo mafana amin'izao fotoana izao.
6. Ny toeran'ny fatorana dia azo nolokoina na nolokoina.
1. Aorian'ny fampangatsiahana dia esory ny lakaoly sisa tavela amin'ny fitaovana tsy milay. Raha ilaina dia alao ny toeran'ny fatorana amin'ny alàlan'ny fanafanana.
2. Tehirizo soa aman-tsara ilay basy lakaoly nikatona aorian'ny fampiasana azy, ary ataovy mangatsiaka tanteraka alohan'ny amboarany. Mety hiteraka fahavoazana ny noôtô basy hafanana.
3. Aza mampiasa solvents mora mirehitra mba hanadiovana ny toeran'ny fatorana. Tsy azo esorina ny residue miraikitra mafana amin'ny akanjo.
4. Mangatsiaka ary mitahiry amin'ny toerana maina tsy azon'ny ankizy latsaky ny valo taona.
Olana, antony ary fepetra fitsaboana
Ny famahanana lakaoly dia sarotra ary ny basy lakaoly dia tsy nafanaina tanteraka. Afana tsara mandritra ny 180 segondra
Mihinana haingana loatra
Bateria ambany dia alefaso ny batterie
Avo loatra ny mari-panaon'ilay hazo lakaoly. Ampiasao ilay tapa-kazo vita amin'ny paosy tany am-boalohany
Ny lakaoly miempo mafana dia miverina miverina mankamin'ny basy lakaoly. Kely loatra ny savaivon'ny lakaoly. Ampiasao ny dity lakaoly namboarina
Rehefa misakafo matanjaka dia tsy miempo tanteraka ilay tsorakazo ary avy eo avelao ny sakafo rehefa vita ny vy lakaoly
Amin'ny faran'ny fametahana, rehefa esorina amin'ny toeran'ny fatorana ny basy lakaoly dia hatsangana ny «filament». Amin'ny faran'ny fametahana dia mbola mivoaka ny lakaoly. Amboary ny famoahana lakaoly amin'ny faran'ny gelatinization.
Hamafa ny lakaoly voarendrika mafana avy amin'ny nozoro. Amin'ny faran'ny gluing, esory ny atody amin'ny workpiece
Previous: Rojo, rojo manandratra, rojo vy, vy rojo vy, famaritana isan-karazany
Manaraka: Jack, jack marindrano, jack mitsangana, jack hidraulika
Lakaoly basy stick
Basy lakaoly mafana